Nanao fanambarana ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy, Pastora David Rakotonirina, sy ny Birao Foibe, androany, milaza fa « Manoloana ny valan'aretina izay misy eto amin'ny tany sy firenena. Ary koa ho fanarahana ny fepetra efa napetraky ny fanjakana Malagasy ny amin'ny famoriam-bahoaka. Dia mandray izany koa ny Fiangonana Loterana Malagasy.
Ka ny Fiangonana rehetra dia akatona avokoa ny Rahampitso alahady faha III mialohan'ny Paska izao, sy ny fotoana rehetra anatanterahana fivoriana rehetra izany.
samedi, 21 mars 2020 13:48
Mozika country: Nodimandry teo amin’ny faha-81 taonany i Kenny Rogers
Mpamoron-kira no mpilalao sarimihetsika i Kenneth Ray Rogers izay fantatra tamin’ny anarana Kenny Rogers teo amin’ny sehatry ny zavakanto. Ny gadona country no tena nahalalan’ny maro an’ity mpanakanto teratany amerikanina ity. 81 taona izy izao nodimandry izao.
Miaka-bidy ny tongolo eto Sambava. Raha ny hita eny an-tsena tamin’ity marainan’ity sabotsy 21 marsa 2020 ity, andro voalohany taorian’ny nanambaran’ny filoha Andry Rajoelina fa misy olona telo voan’ny coronavirus eto Madagasikara, dia 25 000 Ariary ny tongolo lay iray kilao ary 5 000 Ariary tongolobe.
(Jeroe Sary Tohiny)
Nidina teny Ankadindratombo, Kaominina Alasora, Distrika Antananarivo Avaradrano ny Polisim-pirenena, androany maraina, nandrara ireo hetsika mahavory vahoaka toy ny tao amin'ny Fiangonana iray. Izany dia ho fanatanterahana ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy tokony hisian'ny hetsika famoriam-bahoaka manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.
Hidina eny amin'ireo tsena maro samihafa sy ireo toeram-pivarotana isan-karazany ihany koa ny Polisim-pirenena hisoroka ny mety ho fanararaotana amin’ny endriny samihafa.
samedi, 21 mars 2020 13:06
Faritra Mahatsiatra Ambony: Nandray fepetra fiarovana amin’ny fiparitahan’ny coronavirus
Nisy fivorian’ireo tomponandraikitra samihafa eto amin’ny faritra Mahatsiatra Ambony, nanapahan-kevitra sy nandraisana fepetra ho fitandroana ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.
Eo amin’ny lafiny fahasalamana dia hapetraka ny « Barrage sanitaire » miisa telo hanaovana fizahana ireo mpandeha fiara any amin’ny RN7 ka ny any atsimo dia ao Ankaramena, ny avy any amin’ny Faritra Antsinanana dia ao Alakamisy Ambohimaha, ary ao Camps Robin ny any avaratra, ka miara-miasa amin’izany ny Mpitandro filaminana sy ny mpitsabo.
Apetraka ny "Centre de triage" miisa telo ka ao amin’ny CSB Ankofafa ny any avaratra , ao Mahazengy ny any Atsimo, ho an’ny eto Fianarantsoa dia hatokana hanaovana izany triage izany ny Tranovolo ao amin’ny Lapan’ny Faritany. Ny CHU Hopitaly manaram-penitra Andrainjato no handraisana ireo mila atoka-monina.
samedi, 21 mars 2020 13:04
21 mars: Journée mondiale du rangement de bureaux.
samedi, 21 mars 2020 13:03
21 mars: Journée mondiale de la marionnette.
samedi, 21 mars 2020 13:01
21 mars: Journée Mondiale de la Poésie.